कस्तो पीपीई सुरक्षित ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएका पीपीई प्रयोग गरिरहेका छन् तर तिनको गुणस्तर जाँचिएको छैन ।
स्थानीय स्तरमा निर्मित पीपीईले स्वास्थ्यकर्मीमा झूटो सुरक्षाको बोध गराउँछ – डा. लोचन कार्की, अध्यक्ष नेपाल चिकित्सक संघ
सामान्य मेसिनले सिलाएका पीपीईले भाइरस, सूक्ष्म जीव छेक्न सक्दैनन् – अमित चौधरी, बायोमेडिकल इन्जिनियर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
स्थानीय स्तरमा बनाइएका पीपीईको गुणस्तर परीक्षण र मूल्यांकन हुनुपर्छ – डा. श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ भाइरोलजिस्ट
चैत्र २७, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिड–१९ विरुद्घ अग्रपंक्तिमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीका लागि सामान्य मेसिनले सिलाएर बाँडिएको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) ले पूर्ण सुरक्षा नदिने विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरूले स्थानीय स्तरमा बनाइएका पीपीईको गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीलेस्थानीय प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएका पीपीई प्रयोग गरिरहेका छन् । तर तिनको गुणस्तरजाँच्‍ने मुलुकमा संयत्र छैन । ‘सामान्य मेसिनले सिलाइएको पीपीईले भाइरस,सूक्ष्म जीव आदिलाईछिर्नबाट रोक्‍न सक्दैन,’ त्रिविशिक्षण अस्पतालका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमित चौधरीले भने । उनले भाइरसकोव्यासभन्दा सिलाइ मेसिनले पार्ने प्वाल सानो भए मात्र पीपीई सुरक्षित हुने बताए ।
पीपीई सुरक्षा कवचकारूपमा टाउकोदेखि पैतालासम्ममा लगाइन्छ । शंकास्पद वा संक्रमित व्यक्तिकोउपचारलगायत प्रक्रियामा संलग्नले यो लगाउनुपर्छ ।
बायोमेडिकलइन्जिनियर चौधरीले पीपीईको गुणस्तर जाँच्ने उपकरण मुलुकभित्र नरहेको बताए । उनलेविश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसारको पीपीई हुनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ भाइरोलजिस्टडा. श्रवणकुमार मिश्रले पनि स्थानीय रूपमा बनाइएको पीपीईले पूर्ण सुरक्षा दिननसक्ने बताए । ‘हाल केही नभएको अवस्थामा केही त छ भन्‍न मात्र सकिएला,’उनले भने,‘स्थानीय स्तरमाबनाइएका पीपीईको गुणस्तर परीक्षण र मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पीपीईसंक्रमित हावा, पानीकोकण, बाफछिर्न नसक्‍ने हुनुपर्छ ।
डब्लूएचओले कोभिड–१९संक्रमणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलगायतका लागि निर्देशिका तयार गरेको छ ।विशेषज्ञहरू संक्रमणविरुद्घको सुरक्षासँग सम्झौता गर्नु नहुने बताउँछन् । नेपालचिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएको पीपीईकोगुणस्तर प्रमाणित नभएसम्म उपयोग नगर्न डब्लूएचओले समेत भनेको बताए । ‘विश्वकाविभिन्न भागमा स्थानीय रूपले निर्माण गरिएका तर गुणस्तर प्रमाणित नभएका पीपीईप्रयोग गरेर थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्,’उनले भने ।
विश्वव्यापी रूपमास्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएका पीपीई उपयोगपछिको अवस्था हेरेर डब्लूएचओले नेपाललाईसमेत स्थानीयस्तरमा निर्मित पीपीईको गुणस्तर परीक्षण गर्न भनेको उनले जनाए । ‘आफैं पीपीई निर्माण गर्नु राम्रो हो तर यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’डा.कार्कीले भने,‘नत्र स्थानीय रूपमानिर्मित पीपीईले स्वास्थ्यकर्मीलाई फल्स (झूटो) सुरक्षाको बोध गराउने हुँदासंक्रमण हुने सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।’
चिकित्साकर्मीलाईसुरक्षित रहँदै काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा भविष्यमा कोभिड–१९ विरुद्घकोस्वास्थ्य उपचार प्रभावित हुन सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनले औंल्याए ।
इन्जिनियर चौधरीलेउपयुक्त प्रविधिबाट भाइरस प्रवेश हुन नसक्ने खालको सुरक्षा सामग्री निर्माणलाईप्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पीपीईको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरणसमेतछिट्टै भित्र्याउनुपर्छ,’ उनलेभने । उनले पीपीईका निर्माण सामग्री र उपकरण पनि मुलुकमै आवश्यक रहेको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०८:००
स्टोक्स विजडनको उत्कृष्ट खेलाडी
चैत्र २७, २०७६ एएफपी
लन्डन — बेन स्टोक्स विजडनको वर्षको उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडी बुधबार घोषित भएका छन् । यसअघि लगातार तीन वर्ष विजेता रहेका विराट कोहलीलाई उछिनेर स्टोक्स सन् २०२० का सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडी चुनिएका हुन् ।
विजडनले अलराउन्डरका रूपमा उनको प्रदर्शनलाई ऐतिहासिक मानेको छ । सन् २००५ मा एन्ड्रयु फ्लिन्टफ उत्कृष्ट चुनिएयता यो उपलब्धी हात पार्ने स्टोक्स पहिलो इंग्लिस खेलाडी हुन् ।
न्युजिल्यान्डविरुद्धको वान डे विश्वकप फाइनलमा म्यान अफ द म्याच रहेका स्टोक्सले अस्ट्रेलियाविरुद्धको तेस्रो ऐसेज टेस्टमा पनि अपूर्व विजयी इनिङ्स खेलेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०७:५७